Ornamental osisi na-eto eto | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ornamental osisi na-eto eto
Tui Tui ma lekọta ya
Thuja bụ ezinụlọ Cypress. Osisi a (ma ọ bụ shrub), nke nwere okpu okpu, ga-edozi ugbo ala, ebe ndi ozo, ogige obodo, wdg. Na mgbakwunye na okpueze na-acha uhie uhie, thuja ga-atọ gị ụtọ, ebe ọ bụ na osisi ya nwere mmanụ dị oké ọnụ.
Etu esi lekọta peonies, aro
Mma nke okooko osisi peonies na-emesi ya ike na ọ bụ n'ụzọ nkịtị-apụghị ịkwatu. Ọdịdị dị iche iche na agba na ọdịdị: mmadụ nwere ike ịhụ ma ọ bụ okpukpu abụọ ma ọ bụ ndị na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie, dị ka pink na terra na-acha uhie uhie. N'ihi na peonies na-agbalịrị iji ebe kacha mma n'ogige.
Mgbe na otu esi akụ berden, iwu nke nlekọta ifuru
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị gbasara osisi dịka Badan. Ị ga-amụta ihe fatịlaịza Badan na-anọchite anya ya, yana ịchọta ihe ọmụma banyere ịkụ na ilekọta ya n'ọhịa. Ọzọkwa, anyị agaghị eleghara ihe ndị a na-ahụ anya nke mmepụta nke osisi a, iwu maka ịgbara na ilekọta ha. Ị ma?
Isi ụdị bergenia na nkọwa ha
Badan bu uzo nke osisi ugbo ogwu nke ulo kamnelomkovye. A na - akpọ Latin aha Bergenia maka nsọpụrụ nke Karl Augusta von Bergen - German botanist, prọfesọ na Mahadum Viadrin, bụ onye na - akpọ bergenia dị iche iche. Aha a ma ama bụ Badyan. Ihe jikọrọ ụdị osisi a na ezinụlọ nke osisi na-egosi na elu ugwu bụ ebe a mụrụ Bergenia.
Ndị isi nke ụdị pions, anyị ghọtara ọnụ
Peony bụ ifuru na-esi ísì ụtọ nke na-amasị anyị site na Mee ruo na ngwụsị nke June. Ala nna ya bụ ndị subtropics nke North America na Eurasia. Akpụkpọ anụ Peony gụnyere 34 ụdị, nke na-ekewa n'ime 5,000 iche. N'otu oge ahụ, 4,500 bụ ụdị ahịhịa dị iche iche nke ahịhịa ndụ na ọ bụ naanị ụdị 500 dịka osisi. Ị ma?
Dịrị ndụ na akwa akwa, esi esi eto delphinium na saịtị gị
A delphinium ma ọ bụ bog bụ nnukwu mgbakwunye na ubi gị. Ndị na-akọ ubi na-asọpụrụ ya. Mkpụrụ osisi candle inflorescences dị elu karịa ụdị ndị ọzọ, na-enye ogige ahụ na nhazi. Okooko osisi nke delphinium na-anabata ma mmiri ozuzo na ntu oyi. Mkpụrụ ụda oyi nke ụdị ihe na-adọrọ adọrọ ga-eme ka ubi gị ghara ịba ụba.
10 kacha mma ụdị delphinium na a nkọwa
Delphinium nwetara aha ya n'ihi ọdịdị dị iche iche nke okooko osisi, nke na-esekarị dị ka dolphins igwu ọnụ ọnụ. Mkpụrụ osisi, na-eru ihe dị ka mita abụọ n'ịdị elu, na iche iche dị iche iche, ahapụla onye ọ bụla na-enweghị mmasị onye hụrụ flowerbeds na delphiniums. Ị ma? Aha ọzọ maka delphinium bu uzo.
Otu esi esi kpoo lily, nke oma na-elekọta ubi
Lily bụ okooko osisi mara mma nke Liliaceae, nke na-agụnye mkpụrụ osisi perennial nke na-eto site na bulbs. Lily bụ onye a ma ama maka agba dị iche iche, ihe na-esi ísì ísì na ụdị aghụghọ. Ị ma? Lily bụ ifuru nke oghe ala. Ka o wee gosi amara na ịma mma ya niile, ọ ga-etolite n'ubi ahụ.
Chefuo m: ụdị, ọdịda na nlekọta
Ụdị na nkọwa nke Echefuru m Echefu m (Myosotis) bụ mkpụrụ osisi nke sitere na ezinụlọ borage (Boraginaceae). Echefu-m-ọ bụghị ogologo, obere na oke na obere okooko osisi mara mma. Ụdị a dị ọtụtụ ma nwee ihe dịka ụdị osisi 50. Okooko osisi a ma ama ebe niile na a na-achọta ha na ụwa nile, site na Europe ruo South Africa.
Kedu uru bara uru, ọgwụ ọgwụ nke osisi?
Saxifrage, okooko osisi mbụ, bergenia, tii Mongolian, Chagir tii, beran bụ aha niile maka otu osisi. Ọ na - eru n'ogo 30-70 cm ma na - ahọrọ ebe ndị mechiri emechi site na ifufe; ọ nwere ike itolite n'okpuru oké oyi snow. Ị nwere ike izute ya na Siberia, China na Mongolia. A na-ejikarị osisi ọgwụ Bergenia mee ihe na nkà mmụta ọgwụ ọdịnala, dịka ihe ngwọta ya nwere ike ịnagide ọtụtụ mgbaàmà nke ọrịa dị iche iche.
Mgbụsị akwụkwọ akuku tulips
Tulips bụ otu n'ime okooko osisi kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-elekọta ubi. Ha nwere ike ịchọta ha n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwa na ubi. A na-eme ka ọkpụkpụ mara mma site na ịma mma ya na nlekọta na-adịghị mma. Ọ dị mma iburu n'obi na ịkụ mkpụrụ tulips n'ime ala na ọdịda bụ ntakịrị nsogbu. Iji mee ka tulip nwee mmasị na ịma mma ya, ọ dị mkpa ka ị mara otú e si akụ ya.
Nzuzo nke lush blooming hey
Bellflower (lat. Campánula) bụ otu mkpụrụ osisi herbaceous kachasị na ezinụlọ Bellflower. Ezinụlọ ahụ gụnyere ihe karịrị narị mmadụ anọ na-eto eto na mba ndị nwere ihu igwe. Olu mgbịrịgba ahụ na-etolite na Caucasus, Siberia, Asia, Europe, nakwa na North America. Otutu nke uzo di iche iche na-enwe nnukwu oganihu nke ndi mmadu na-eto n'ubi, dika o ji eme ihe ndi ozo, oyi-siri ike na ndi na-adighi nma.
Silver Cineraria: kụrụ ma lekọta
Cineraria bụ nke ndị ezinụlọ Astrov, ọdịdị Krestovnik. E nwere ọtụtụ ụdị cineraria, ha niile dị iche na ibe ha n'ọdịdị. E nwere okooko osisi herbaceous, osisi osisi. Ihe niile dị iche iche nwere ọdịdị dị iche, agba na nha. Ụdị cineraria kachasị ewu ewu bụ ihe mara mma cineraria, ọbara cineraria na ọlaọcha cineraria.
Atụmatụ maka ịkụ na ilekọta primrose
Primula - ifuru sitere na ezinụlọ nke primroses. Nke a bụ osisi na-eto eto, na-eto na mmalite oge opupu ihe ubi. A maara ihe karịrị 500 ụdị primroses bụ ndị a na-ahụkarị n'ebe dị iche iche: oke ohia, na mbara ọzara, n'ugwu ugwu, ọnọdụ bụ isi maka nkesa bụ ala mmiri dị na humus. Ihe dị iche iche nke primrose perennial.
Na-eto eto laurels n'ụlọ
Ndị na-elekọta Lavatare hụrụ maka ịdị mfe. Ọ naghị atụ egwu ifufe na oyi na-atụ, anyanwụ siri ike, oké ọkọchị. Ma ọ bụrụ na ị nye ya ọnọdụ kwesịrị ekwesị maka ibu, ọ nwere ike ịmụba na ya. Popular iche na iche laureates Otu ornamental osisi bụ iche iche na iche iche.
Atụmatụ nke na-eto eto Roses, esi eto rose si bouquet
Rose bụ eze nwanyị okooko osisi. Osisi mara mma nke kachasị mma - ụzọ dị mma isi mee onwe gị obi ụtọ ma ọ bụ ndị ị hụrụ n'anya. Okpokoro osisi nke na-eto eto n'ubi agaghi echefu ya mara mma na ihe ndi ozo di iche iche. Ya, dị ka ihe nnọchianya nke ịhụnanya, ịdị ukwuu na ịdị nro, ga-akpali gị ka ị rụpụta ihe ọhụrụ. Ọtụtụ mgbe, ị ga - achọ ka eto eto si n'aka ndị ikwu gị, ndị ikwu gị, ndị enyi gị, ma n'agbanyeghị otú i si agba mbọ, a naghị anabatacha mkpụrụ gị ma kpochaa.
Technology cultivation na-elekọta surfiniya
Ọtụtụ mgbe na mbara ala, ebe ndịda na ebe ndị dịpụrụ adịpụ ị nwere ike ịchọta okooko osisi na-adọrọ mmasị - dị ka petunia, ma ọ bụghị petunia. Ya mere, nke a bụ ụdị petunia - Surfinia. Surfinia bụ ngwakọ nke petunia ampelous, bụ nke ndị na-azụ atụrụ Japan na-eri nri afọ iri abụọ gara aga. Ndị okooko osisi jupụtara na ya, ogologo osisi ma na-ejigide ya ọbụna mgbe mmiri ozuzo gasịrị.
Esi esi eto eto
Nri - otu n'ime okooko osisi kachasị ama n'etiti ndị na-elekọta ubi. Ịmalite ịta nri ubi abụghị ọrụ siri ike, kama iji nweta okooko osisi kachasị mma, ụfọdụ ihe ọmụma ka dị mkpa. Ị ma? Na Gris oge ochie, a na-akpọ anụ ahụ "ifuru nke Zeus". Ọnọdụ maka ịba ọgaranya na Carnation Ogige nwere ihe na-esi ísì ụtọ na ihe dị iche iche na agba.
Otu esi eto lobelia n'ubi gi
Ọmarịcha okooko osisi lobelia mara mma anaghị achọ ka ihe ọkụkụ na-elekọta. Ya mere, gardeners kwadoro n'atụghị egwu na-ekpebi na cultivation nke osisi na gị na saịtị. Otu esi eme nke a, anyi ga akowa n'ihu. Lobelia: nkọwa nke osisi Lobelia bụ kwa afọ, ma na-elekọta otu osisi ma ọ bụ ogwu.
Iche iche rejuvenated: ọtụtụ nkume Roses maka ndozi ezumike
Ngwakọta sitere na molodilas - nke a bụ nhọrọ kachasị dị irè maka ógbè dịpụrụ adịpụ, bụ nke anyanwụ na-enwusi ike ma ghara ịnya isi ala. N'ụzọ dị mma, ụmụaka ahụ nwere ụdị dị iche iche, ọnụ ọgụgụ ha karịrị iri ise. Ma anyị ga-elekwasị anya na itoolu kachasị na ndị mara mma.
Atụmatụ florist: esi na mgbe transplant gerbera mgbe zuo?
Nnụnụ enyí nnụnụ: nchịkọta na iji
Mkpụrụ tomato dị iche iche na-enweghị atụ dị iche iche na mkpụrụ osisi buru ibu nke Siberia "Königsberg"